म FPAM बाट थाकेको छु Martech Zone
सोमबार, सेप्टेम्बर 17, 2007 शुक्रवार, अक्टुबर 24, 2014 Douglas Karr
यदि तपाईं फेसबुकमा हुनुहुन्छ, तपाईं FPAM'd प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, हैन?
यो धेरै हास्यास्पद लाग्छ, तर त्यस्तो छैन। मलाई लाग्छ कि म यो कल गर्न सुरु गर्दैछु। FPAM = फेसबुक स्प्याम। मेरो ईमेल इनबक्स मित्र आमन्त्रित, वास्तविक घटना आमन्त्रितहरु, भर्चुअल मित्र आमन्त्रितहरु को भरिएको छ, मेरा साथीहरु मलाई प्रश्न गर्न प्रश्नहरु छन्, म यो फेसबुक अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्छ, म उनीहरु को सबै भन्दा राम्रो मित्र हुनु पर्छ, म एक फ्रिकिन समुद्री डाकू जस्तै कुरा गर्नु पर्छ ...।
मलाई एक्लै छोड्नुहोस्, फेसबुक!
मेरो जीवन फेसबुकको वरिपरि घुम्दैन - न मेरो अनलाइन जीवन। फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्क हो जुन म सम्बन्धित छु। यस्तो देखिन्छ कि यो ती सबै हुन प्रयास गरिरहेको छ। हामीसँग त्यो पटक थियो, यसलाई प्रोडिजी भनियो। के तपाईहरु लाई याद छ? एओएल पनि त्यहाँ थियो। दुबै आईएसपीहरू थिएनन्, तिनीहरू तपाईलाई अनलाइन चाहिने सबै कुरा हुन प्रयास गरिरहेका थिए। AOL ले तपाईंलाई तिनीहरूको ब्राउजरको साथ वेब ब्राउज गर्न केहि समयको लागि बनायो।
यो काम गरेन, र यो अब काम गर्ने छैन। फेसबुक - तपाई मेरो जीवनको केन्द्र हुनुहुने छैन। मसँग धेरै साथीहरू छन् (फेसबुक बाहिर), वास्तविक जीवनमा सामाजिक जीवन, र भर्चुअल विश्वमा अन्य रुचिहरू।
फेसबुकमा अनुप्रयोगको लागि एक उत्तम विचार छ, "मलाई एक्लै छोड्नुहोस्" अनुप्रयोग। यस अनुप्रयोगले सबै आगत अनुरोधलाई कुनै पनि चीजको लागि अवरोध गर्दछ र ईमेलको साथ अनुरोधकर्तालाई अटोरेस्पन्डमा, "मलाई एक्लै छोड्नुहोस्" भन्छ। जब तपाईं मेरो फेसबुक पृष्ठ भ्रमण गर्नुहुन्छ, यो पढ्नुपर्दछ, "मलाई एक्लै छोड्नुहोस्!"
टैग: फेसबुकफेसबुक स्प्यामएफपीएएम
सेप्टेम्बर १,, २०११ 17::2007० अपराह्न
यो हुन सक्छ कि तपाई फेसबुक मा धेरै साथीहरु संग हुनुहुन्छ।
जे होस्, यदि तपाईं आमन्त्रित हुन चाहानुहुन्न भने, त्यसो भए फेसबुकमा तपाईंको खोजी सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि कोहीले तपाईंलाई फेला पार्न र साथी अनुरोधहरू गर्न सक्दैन, तपाईंलाई सन्देश पठाउँनेछ र यस्तै अन्य। मैले मेरो प्रोफाइल तल कडा र फेरि जेलको रूपमा हेरेँ र अब मैले चाहेको व्यक्तिहरूबाट मात्र आमन्त्रित / सन्देशहरू प्राप्त गर्दछु।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 19::2007० अपराह्न
धन्यवाद दुआन! म त्यो गर्न गइरहेको छु!
सेप्टेम्बर 18, 2007 मा 12: 26 AM
मैले वास्तवमै केहि दिन अघि मेरो खाता निष्क्रिय गरें। निष्क्रियतामा उनीहरूले तपाईंलाई किन सोध्छन्। विकल्प मध्ये एक पाठ बाकसको साथ "अन्य" थियो। तिनीहरूले यसको लागि सोधे। मैले राखे
"धेरै चाँडै तपाईले बेच्ने / मेरो जानकारी विज्ञापन अभियानलाई दिनुहुन्छ कि विज्ञापन विशेष गरी मेरोतर्फ लक्षित गर्दछ, यदि तपाईं तयार छैन भने।"
मलाई शंका छ यसले त्यहाँ केही पनि हलचल मच्चाउँछ, तर तिनीहरूले मलाई मेरो दुई प्रतिशत राख्ने मौका दिए। स्वाभाविक रूपमा, मैले यसलाई लिए!
सेप्टेम्बर 18, 2007 मा 2: 16 AM
म घटनाहरू वा भित्ते सन्देशहरू वा साथी अनुरोधहरूको बारेमा फेसबुकबाट ईमेलहरू खडा गर्न सक्छु। के म खडा गर्न सक्दिन भन्ने हो अनुप्रयोगहरू जुन मँ चाहन्न। यदि कुनै अनुप्रयोगले मलाई ईमेल गर्दछ भने म तत्काल यसलाई रोक्दछु।
मलाई "मलाई एक्लै छोड्नुहोस्" अनुप्रयोगको विचार मनपर्दछ! यसले मलाई हप्तामा minutes मिनेट बचाउँदछ जब म Gmail मा "बाट: फेसबुक" मा हिट गर्दछु र धेरै मेटाउँछु।
तपाईंले वर्णन गरिरहनु भएको रूपमा भर्खरै परिभाषित गरिएको छ बेकन.
तर तपाई वास्तवमै सेटिंगले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ के सूचनाले फेसबुकले तपाईंलाई पठाउँदछ - मात्र खाता अन्तर्गत हेर्नुहोस्> सूचनाहरू। तपाईं सबै विकल्पहरू अनचेक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंले सायद धेरै ई-मेलहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन 😉
कसलाई थाहा थियो! मैले आज २ चीजहरू सिकें, बेकन र ती सबै सूचनाहरू कसरी हटाउने। धन्यवाद हन्नेस!
म साथीहरूसँग कुराकानी गर्न रमाईलो गर्दछु, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूसँग जससँग मैले सम्बन्ध विकास गर्दछु र चीजहरू समान हुन्छन्।
मेरो लागि, साथी एक त्यस्तो व्यक्ति हो जुन मलाई थाँहा हुन्छ, कि मसँग चीजहरू समान छन् र हामी दुवैले एक अर्काको जीवनलाई मूल्यवान बनाउन सक्छौं।
सायद के आवश्यक छ साथीहरूको 'ग्रेडिंग'? केहिलाई अरु भन्दा नजिक जान अनुमति दिइन्छ, जबकि अरुहरु लाई मात्र परिचित हुन्छन् जुन तपाईले ठाउँ समय समय देख्नुहुन्छ!
ती जो मलाई बग गर्छन् 'साथीहरू' हुन् जसले मलाई दिनहुँ केहि बेच्ने प्रयास गर्दछ। मैले तिनीहरूलाई 'अनफ्रेन्ड' गर्न शुरू गरिसकें एक पटक उनीहरूले त्यो शुरू गरे!
म भेम्पायर र वेयरवुल्भले टोके पनि बिरामी छु, र मेरो चाँदीको गोली आपूर्ति गरीरहेको दुविधाको सामना गर्दै छु!
के धेरै व्यक्तिले महसुस गर्दैनन् कि अनुप्रयोगहरू थप्नुको मतलब भनेको उनीहरूको विवरणहरू प्रत्येक चोटि उनीहरूलाई थप्ने क्रममा थप फैलाइएको छ!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 20::2007० अपराह्न
यहाँ सहयोगी रायहरूको एक धेरै।
स्तिफनसले दिएको टिप्पणीलाई पनि। फेसबुकले सोमबार फ्लायर्स प्रो सुरू गर्‍यो, जुन गुगल विज्ञापन शब्दहरू जस्तै छ। फेसबुकले तपाइँको जानकारी बेच्ने छैन, तर तिनीहरूको प्रणालीले तपाइँको प्रोफाइल पढ्दछ र तपाइँले विज्ञापनकर्ताबाट फेसबुकमा तल राख्नु भएको वरपरको उडानहरू देख्नुहुनेछ।
मलाई लाग्दैन कि यो नराम्रो चीज हो। मलाई लाग्छ धेरै व्यक्तिहरूका लागि यो फेसबुक कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई यसको स्वादमा चिम्न कसरी सिक्ने भन्ने बारेमा जान्न सकिन्छ। मैले यसलाई डिजाइन गरेको छु त्यसैले म मात्र सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहन्छु जुन मैले चाहें, जुन फेसबुकले शुरूदेखि नै अपील गर्यो। यदि तपाईंलाई केहि मनपर्दैन भने आफ्नो सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्।